Nhau - 6 Zvinhu Zvinhu Taiwan Zvikuru muMedical Field
Kutanga kunzwa Taiwan? Hunhu hwekurapwa kwayo, hutano hutano system uye medtech zvigadzirwa zvinogona kukufadza iwe
Chitsuwa chevanhu vane mamirioni makumi maviri nemana, Taiwan, yaimbova umambo hwefekitori munguva yakapfuura uye ikozvino inozivikanwa kwazvo yezvinhu zvekugadzira zveIT, yakagara ichizvitenderedza kuenda kunzvimbo yekurapa. Vanhu vashoma vanoziva kugona kwayo muhunyanzvi hwekurapa uye hutano hutano system.
1. Inishuwarenzi yehutano kune Vese
Zvinogona kunzwika sezvisingaitiki, asi Taiwan yakwanisa kuvhara vagari vese veinishuwarenzi yehutano kubva kuma1990. Iyo yakavakirwa pane imwechete-mubhadharo system iyo yaibhadhara kubva pamubhadharo wemutero uye mari yehurumende.
Nenishuwarenzi yehutano, vagari vemamiriyoni makumi maviri nemana vane mukana wekuwana kurapwa nemutengo unodhura. Statistically inayo, kune murwere akapfuura nekuvhiya kwekurapa, mutengo muTaiwan unongova chikamu chimwe chete muzvishanu zvacho muUS.
Pamusoro pazvose, inishuwarenzi yehutano ine mukurumbira wepasirese. Iyo dhatabhesi Numbeo yakaratidza chinzvimbo cheTaiwan ine yepamusoro hutano hutano system pakati penyika makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe mu2019 ne2020.
2. Yepamusoro Yemhando uye Inowanikwa Yekurapa Kurapa
Kuwanika kwechipatara nekurapwa ndiko kiyi kune hupenyu hwakanaka hunhu. Pakati pezvipatara zvepamusoro mazana maviri pasi rose, Taiwan yakatora gumi nemana yadzo uye yakamisikidzwa sevatatu vepamusoro vachitevera US neGerman.
Vanhu muTaiwan vakaropafadzwa kuve nehutano hwakanaka hwekurapa nevashandi vehunyanzvi uye kuwana kune zvipatara zvemhando yepamusoro pamutengo unodhura. Sekureva kwemagazini yeECOWORLD Health Care Index yakaburitswa mu2019, Taiwan yakaratidza chinzvimbo chepamusoro nehurongwa hwakanakisa hwekuchengetedza hutano pakati penyika 89. Nzvimbo iyi inofungidzirwa nehutano hwakakwana, kusanganisira zvigadzirwa, kugona kwevashandi, mutengo, kuwanikwa, uye kugadzirira kwehurumende.
3. Taiwan Inorwa COVID-19 Zvinobudirira
Chitsuwa chaimbove chakanyorwa sengozi yepamusoro yeCOVID-19 kubuda kwakazove muenzaniso wepasirese une chirwere ichi. Sekutaura kweCNN, Taiwan iri pakati penzvimbo ina dzinorwisa COVID-19 zvinobudirira uye kiyi kugadzirira kwayo, kumhanya, kwepakati kuraira, uye kuomarara kwekuteedzera kwekuteedzera.
Taiwan's National Health Command Center yaita matanho akati wandei ekumisa chirwere ichi kuti chisapararira pakutanga chaipo. Inosanganisira kudzora pamuganhu, dzidzo yeruzhinji yehutsanana, uye kuwanikwa kwemeso ekumeso. Muna Chikumi, yaive yakaratidzira mazuva makumi manomwe nematatu anoteedzana pasina chero hutachiona hwemumba. Yakatemwa kusvika ikozvino June 29th, 2020, yapera ne447 yakasimbiswa kesi pakati peiyo 24million huwandu hwevanhu, iri nzira shoma kana ichienzaniswa nedzimwe nzvimbo dzine vanhu vakaenzana.
4. cosmetic Kuvhiya Hub
Mushonga wekushongedza uye kuvhiya kwekushongedza zvakaisa Taiwan munzvimbo inotungamira. Taiwan ine makiriniki erunako mukukwirira kwakanyanya kupa kuvhiya kwepamberi kwepurasitiki kusanganisira kuwedzera zamu, liposuction, kuvhiya kaviri kweziso, pamwe nekurapa kusinga pindike senge laser neIPL kurapa. Sekureva kwedata kubva kuTaiwan Ministry of Health and Welfare, kwaimbove nekota yevanachiremba veku cosmetic vekuKorea vakadzidziswa kuTaiwan.
5. Kuwanika Kwakakwirira Kwezvigadzirwa Zvemberi Zvekurapa
Taiwan ine nyanzvi dzakadzidziswa uye kugona kukuru kwemidziyo yepamusoro. Semuenzaniso, iyo yepamusoro-soro robhoti-yakabatsira system Da Vinci yakaunzwa kuTaiwan kubvira 2004. Kubata makumi matatu nemashanu kwavo kunoita kuti Taiwan ive pamusoro mukukwirisa kwemidziyo yekurapa. Yakagadzirisa zvakanyanya kuvhiya muGynecology, Urology, uye Colon uye Rectal Surgery Division.
6. Yakakwira-Yemhando Kuvhiya Kurapa
chitsuwa chakaisa marekodhi mazhinji munharaunda yekuvhiya kwekurapa. Taiwan ndiyo yekutanga kuita inobudirira moyo kupinza muAsia, ine budiriro ye99% mune coronary angioplasty & stenting maitiro, chiyero chekutanga chisingasviki 1% mukuomarara.
Zvimwe kunze kweizvozvo, isu zvakare tine yekutanga-yevana kuvhiya kwechiropa muAsia. Kupona kwehuwandu mushure mekuvhiyiwa mumakore mashanu kwakapfuura iyo US kuti ive yepamusoro pasirese.
Sezvakanyorwa pamusoro, Taiwan inokwanisa mukupa kwakakwenenzverwa nzira dzekurapa senge kuvhiya kwekuzora, kuvhiya kwese kunosanganisira kuomarara kugona kwekupedzisira uye kubatana kwehunyanzvi. Kubudirira pamusoro apa kutumidza mashoma, nzira yakawanda yekuwanikwa mune ramangwana.